Sidee Liverpool ugu soo gudbi kartaa wareega 16-ka Champions League????….(XOG DHAMMEYSTIRAN) – Gool FM
Sidee Liverpool ugu soo gudbi kartaa wareega 16-ka Champions League????….(XOG DHAMMEYSTIRAN)
Byare December 11, 2018
(Europe) 11 Dis 2018. Liverpool ayaa caawa marti galineysa Napoli kulan ku xiran mustaqbalkeeda Champions League ee kal ciyaareedkan.
Koox kasta oo ku jirta Group C ayaa ciyaartay 5-kulan, Reds ayaana ku jirta kaalinta saddexaad iyadoo ka dambeysa PSG Iyo Napoli.
Kooxda Jurgen Klopp ayaa laga adkaaday saddexdii kulan ee ugu dambeeyay tartanka, waana markii ugu horreysay ay sidan oo kale ku dhacdo Liverpool wareega group yada ee Champions League.
Haddaba waxay taa ka dhigan tahay inay leedahay 6-dhibcood, halka kooxda reer France ay leedahay 8-dhibcood, mida reer Talyaanina 9-dhibcood.
Hal kulan ayaa harsan, Group C oo dhana wuu u furan yahay suuro galnimada inay u soo gudbaan wareega 16-ka marka laga reebo kooxda Red Star Belgrade oo iyadu isaga hartay tartanka Yurub oo idil.
Kulanka u harsan Reds ayay caawa la ciyaari doontaa kooxda reer Talyaani ee Napoli
Haddaba sidee kooxda reer England uga soo bixi kartaa wareega Group-yada?
Waxay ku soo bixi kartaa inay 1-0 uga adkaato kooxda reer Talyaani ee Napoli, oo markaa waxay labada koox wada yeelan doonaan min 9-dhibcood laakiin Liverpool ayaa soo bixi doonta.
Laakiin haddii ay Liverpool ku adkaato 2-1 way ka hari doontaa tartanka waayo waxaa lagu reebi doonaa sharciga ah ‘Away Goals Rule’ maxaa yeelay lugtii hore ay Napoli kula soo ciyaartay Talyaaniga waxaa looga soo adkaaday 1-0 oo nadiif ah.
Ma jirtaa si kale oo ay ku soo bixi karto Liverpool?
Haa, way soo bixi kartaa haddii ay PSG kulanka u harsan bar-baro ama guul daro kala kulanto kooxda Red Star Belgrade isla markaana ay Liverpool ka adkaato Napoli.
Markaan kooxda Jurgen Klopp looma fiirin doono farqiga goolasha oo waxaa laga doonayaa oo qura badis intey rabto goolasha ha ahaadaan 2-1, 3-2 Iyo wixii la mid ah.
Laakiin haddii ay adkaato PSG, Liverpool waxaa qasab ku ah inay ka adkaato Napoli iyadoo waliba iska ilaalineysa sharciga ‘Away Goals Rule’ oo waa inay kooxda reer Talyaani kaga adkaato 1-0 ama 2-0 iyo wixii ka badan.
Santiago Solari oo u jawaabay Cristiano Ronaldo
Guardiola oo ka hadlay xaalada xidigaha ka dhaawacan kooxdiisa kahor kulanka Hoffenheim ee Champions League